" မြန် မာ တိုင်း ရင်း သူ လေး တ ဦး ဧ။် ကြေ ကွဲ ၀မ်း နည်း ဖွယ် ဖြစ် ရပ် မှန် ၊ မိ ခင် တ ဦး မှ ကိုယ် တိုင် ရင် ဖွင့် ချက် " - ရွှေမြို့တော်
ဧပြီလ 29, 2011 8:58amတွင်ဖြိုးစည်သူ မှတင်ပြသောဘလော့ပို့(စ်)ဖြစ်ပါသည်
* " မြန် မာ တိုင်း ရင်း သူ လေး တ ဦး ဧ။် ကြေ ကွဲ ၀မ်း နည်း ဖွယ် ဖြစ် ရပ် မှန် ၊ မိ ခင် တ ဦး မှ ကိုယ် တိုင် ရင် ဖွင့် ချက် "
ကျ မ နာ မည်( နော် လေး ၀ါး ) ပါ ။ က ရင် ပြည် နယ် ဖါး အံ မြို့အ နီး က ရွာ မှာ နေ ပါ တယ် ။ အ ငြိမ်း စား အ လယ် တန်း ပြ ကျောင်း ဆ ရာ မ တ ဦး ပါ။ အ သက် ၅၈
နှစ် ပါ။ သား သ မီး ၅ ယောက် ရှိ ပါ တယ် ။ ကျ မ ရဲ့တ တိ ယ သ မီး လေး ရဲ့ရင် နင့် ဖွယ်၊ ၀မ်း နည်း ကြေ ကွဲ ဖွယ် ဖြစ် ရပ် များ ကို က ရင် အ မျိုး သ မီး လေး
များ၊ မြန် မာ အ မျိုး သ မီး တိုင်း ရင်း သူ လေး များ သ မီး ငယ် တူ မ ငယ် များ အား လုံး ဖတ် ရူ ပြီး ကျ မ သ မီး လေး လို အ မှား မျိုး မ ကြုံ ရ လေ အောင် စိတ်
ရင်း စေ တ္တာ နာ အ ပြည့် ထား ပြီး မိ ခင် မေ တ္တာ အ ပြည့် ထား ပြီး သ တိ ပေး ရေး သား လိုက် ရ တာ ပါ ။ ကျ မ နဲ့ကျ မ သ မီး လေး တို့ရဲ့ဘ ၀ ဟာ သေ မ ထူး၊ နေ
မ ထူး ဘ ၀ မို့မြန် မာ အ မျိုး သ မီး ငယ် လေး တွေ ကို ကျ မ သ မီး လေး လို အ ဖြစ် ဆိုး မျိုး မ ကြုံ တွေ့ရ လေ အောင် သ တိ ပေး ရေး သား လိုက် ရ တာ ပါ။ ကျ မ
သ မီး လေး နာ မည် က ( နော် လီ ဇာ ) ပါ။ ကျ မ သ မီး လေး ဟာ က ရင် ပြည် နယ် မှာ ၁၀ တန်း အောင် ပြီး ရန် ကုန် မြို့အင်း စိန် က အ ဒေါ် ( ကျ မ အ မ အ ရင်း )
အိမ် မှာ နေ ပြီး ရန် ကုန် တ က္က သိုယ် မှ ဓါ တု ဗေ ဒ ဘွဲ့ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကျ မ အ မ က အ စိုး ရ အ ထည် စက် ရုံ တ ခု က ဒု စက် ရုံ မှုး ပါ။
ပင် စင် ယူ ပြီး အ ခု တော့ ၈ တန်း ၊ ၉ တန်း၊ ၁၀ တန်း ကျောင်း သား တွေ ကို အိမ် မှာ ဘဲ ကျု ရှင် သင် ပါ တယ်။ သူ့အ မျိုး သား က လည်း အင်း စိန် ရ ထား စက် ရုံ
က စက် ခေါင်း ပြင် အင် ဂျင် နီ ယာ တ ဦး ပါ။ ကျ မ အ မ တို့မိ သား စု တွေ က ကျ မ တို့ထက် စာ ရင် စီး ပွါး ရေး အ စဉ် ပြေ ကြ ပါ တယ်။ သူ့မှာ တော့ သား ၂
ယောက် ဘဲ ရှိ ပါ တယ်။ သ မီး အ ရင်း မ ရှိ တော့ ကျ မ သ မီး လေး ကို သ မီး အ ရင်း လို အ ရမ်း ချစ် ပြီး အ ရမ်း ဂ ရု စိုက် ပါ တယ်။ သ မီး လေး ဟာ တ က္က သိုယ် က နေ
ဘွဲ့ ရ ပြီး လွန် ခဲ့ တဲ့ ၂ နှစ် ခန့် ( ၂၀၀၉ ခု နှစ် မေ လ ) က အ ရှေ့ မ လေး ရှား နိုင် ငံ ( ကို တာ ကင် နာ ဘာ လူး ) ဆို တဲ့ မြို့က ရေ သန့်စက်
ရုံ တ ခု မှာ အ လုပ် ရ ခဲ့ ပါ တယ်။ ( ဘ ရူ နိုင်း နိုင် ငံ ) နဲ့နီး ပါ တယ်။ ရန် ကုန် က အ လုပ် ရှာ ဖွေ ရေး အေး ဂျင် စီ တ ခု က လုပ် ပေး တာ ပါ။ လေ ယဉ် လက်
မှတ် အ ပါ အ ၀င် မြန် မာ ငွေ ၁၈ သိန်း လောက် ကုန် ကျ ပါ တယ် ။ ကျ မ တို့က စီး ပွား ရေး အ စဉ် မ ပြေ ကြ လို့အင်း စိန် မှာ နေ ကြ တဲ့ သ မီး အ ဒေါ် တွေ ဘဲ
အ လုပ် ရှာ ပေး ကြ ပြီး ငွေ လည်း သူ တို့ ဘဲ အ ကုန် အ ကျ ခံ ကူ ညီ ပေး ကြ ပါ တယ် ။ သ မီး လေး ဟာ အင် မ တန် ရိုး သား ပါ တယ် ။ စိတ် ရင်း စေ တ နာ လည်း အ ရမ်း
ကို ဖြူ စင် ပါ တယ် ။ အ လုပ် ကို လည်း တ အား ကို ကြိုးး စား ပါ တယ် ။ ဒါ ကြောင့် အ လုပ် အ တူ တူ လုပ် နေ ကြ တဲ့ ၀န် ထမ်း အား လုံး ချစ် ကြ ပါ တယ်၊ မြန်
မာ လူ မျိုး ဆို လို့သ မီး နဲ့ ( ချင်း ) တိုင်း ရင်း သူ လေးဘဲ ရှိ ပါ တယ် ။ သူ က သ မီး ထက် ၁ နှစ် လောက် စော ပြီး မ လေး ရှား နိုင် ငံ ကို ရောက် တာ ပါ ။
မြန် မာ ပြည် က အ မျိုး သ မီး တ ယောက် ရှိ လို့ သ မီး အ တွက် လည်း အ ဖေါ် ရ ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ သ မီး ရောက် ပြီး ၆ လ လောက် နေ တော့ အဲ ဒီ( ချင်း )ကောင် မ လေး
က အာ ရပ် နိုင် ငံ တ ခု ဖြစ် တဲ့ ( ကာ တာ နိုင် ငံ ) ကို လ ခ ကောင်း လို့ပြောင်းသွား ခဲ့ ပါ တယ်။
သ မီး လည်း တ ယောက် ထဲ နေ ရ တာ ပြင်း တော့ ရ တဲ့ လ ခ လေး စု ပြီး ကွန် ပြူ တာ လေး တ လုံး ၀ယ် ပြီး အ လုပ် ပြီး တဲ့ အ ချိန် ၊ အား တဲ့ အ ချိန် တွေ မှာ မြန်မာ ပြည်
မှာ ရှိ တဲ့ ဆွေ မျိုး သား ချင်း များ၊ မိတ် ဆွေ သူ ငယ် ချင်း များ၊ နိုင် ငံ ခြား ရောက် နေ တဲ့ မိတ် ဆွေ သူ ငယ် ချင်း များ ထံ အင် တာ နက် က နေ
ဆက် သွယ် စ ကား ပြော ကြ ပါ တယ် ။ နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ အ လုပ် လုပ် နေ ကြ တဲ့ မြန် မာ အ မျိုး သား ၊ အ မျိုး သ မီး တွေ နဲ့လည်း အင် တာ နက်
က နေ မိတ် ဆွေ သစ် တွေ ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။ နိုင် ငံ ခြား ရောက် ပြီး ၇ လ ( ၂၀၁၀ ဇန် န္န ၀ါ ရီ လ ) လောက် နေ တော့ နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တ ခု မှာ အ လုပ်
သွား လုပ် နေ တဲ့ မြန် မာ ပြည် က ကောင် လေး တ ယောက် က သ မီး ဆီ အင် တာ နက် က နေ ဆက် သွယ် ပြီး မိတ် ဆွေ ဖွဲ့ပါ တယ် ။ သ မီး လို ဘဲ နိုင် ငံ ခြား မှာ အ လုပ်
လုပ် နေ တဲ့ မြန် မာ လူ မျိုး ဆို တော့ သ မီး လည်း မိတ် ဆွေ သ ဘော မျိုး နဲ့ လက် ခံ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အ လုပ် အား တိုင်း အဲ ဒီ ကောင် လေး က သ မီး ဆီ အင် တာ
နက် က နေ တ ဆင့် စ ကား တွေ ပြော လာ ပါ တယ် ။ ကောင် လေး က လည်း သ မီး အ လုပ် အ ကြောင်း တွေ ၊ မိ သား စု ဆွေ မျိုး သား ချင်း အ ကြောင်း တွေ ၊ မ လေး ရှား မှာ
လုပ် ရ ကိုင် ရ နေ ရ ထိုင် ရ တာ အ စဉ် ပြေ မ ပြေ အ စုံ မေး ပါ တယ်။ သ ဘော လည်း ကောင်း ပါ တယ်။ သ မီး က လည်း ကောင် လေး မေး သ မျှ အ မှန် အ တိုင်း ပြန် ဖြေ
ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ သ မီး တို့ က က ရင် လူ မျိုး ဖြစ် ကြောင်း ၊ မောင် နှ မ ၅ ယောက် ရှိ ကြောင်း၊ မိ ဘ များ က ဆင်း ရဲ ကြောင်း ၊ ၁၀ တန်း အောင် ပြီး အင်း
စိန် က အ ဒေါ် အိမ် မှာ နေ ပြီး တ က္က သိုယ် တက် ခဲ့ ကြောင်း၊ ကျောင်း ပြီး တာ နဲ့အ ဒေါ် တွေ ရဲ့ကူ ညီ မူ နဲ့မ လေး ရှား ကရေ သန့်စက် ရုံ တ ခု မှာ အ
လုပ် ရ ခဲ့ ကြောင်း၊ အ လုပ် က တော့ အ ရမ်း ကို ပင် ပန်း ကြောင်း၊ လ ခ လည်း အ ရမ်း နဲ တဲ့ အ ကြောင်း၊ ၂ နှစ် လောက် သီး ခံ လုပ် ပြီး မှ တ ခြား လ ခ ကောင်း
တဲ့ နိုင် ငံ တ ခု ကို ကူး ဘို့စိတ် ကူး ထား ကြောင်း၊ အ မှန် အ တိုင်း သ မီး က ဖြေ ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကောင် လေး က လည်း သူ. အ ကြောင်း တွေ ၊ သူ နေ တဲ့ နိုင်
ငံ အ ကြောင်း တွေ ၊ သူ့ရဲ့အ လုပ် အ ကြောင်း တွေ ကို လည်း သ မီး ကို ပြော ပြ ပါ တယ်။ နောက် ပြီး သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ မှာ အ လုပ် တွေ လည်း အ ရမ်း ပေါ် တဲ့ အ
ကြောင်း ၊ လ ခ လည်း အ ရမ်း ကို ကောင်း တဲ့ အ ကြောင်း၊ လို အပ် တဲ့ အ ကူ အ ညီ ရှိ ရင် သူ့ကို ပြော ဘို့အ ကြောင်း၊ အ စွမ်း ကုန် ကူ ညီ ပေး မဲ့ အ ကြောင်း
၊ ပြော လာ တော့ သ မီး က လည်း ကောင် လေး ကို အ ရမ်း ကို လေး စား ပြီး ခင် မင် သွား ခဲ့ မိ ပါ တယ်။ ကောင် လေး က လည်း အ လုပ် အား တဲ့ အ ချိန် တိုင်း သ မီး ဆီ
အင် တာ နက် က နေ ဆက် သွယ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။ ကောင် လေး နဲ့မိတ် ဆွေ တွေ ဖြစ် ပြီး ၂ လ လောက် ( ၂၀၁၀ ခု မတ် လ ဆန်း ) နေ တော့ ကောင် လေး က သ မီးဖုံး နံ
ပါတ် ကို တောင်း လာ လို့သ မီး က လည်း ပေး လိုက် ပါ တယ်။ ကောင် လေး က လည်း မ ကြာ မ ကြာ သူ အ လုပ် လုပ် တဲ့ နိုင် ငံ က နေ သ မီး ဆီ ဖုံး တွေ ဆက် လာ ပါ တယ်
။ ဒီ လို နဲ့ တ ယောက် နဲ့တ ယောက် အ ရမ်း ရင်း နှီး လာ ကြ ပြီး ၁ လ ကျော် လောက် နေ တော့ ကောင် လေး က သ မီး ဆီ ချစ် ခွင့် တောင်း ခံ ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး က
အ ဖြေ တော့ ချက် ချင်း မ ပေး ခဲ့ ပါ ဘူး။ ရိုး ရိုး သား သား မိတ် ဆွေ လို ဘဲ ခင် မင် ရင်း နှီး ချင် တဲ့ အ ကြောင်း၊ ဘာ သာ လည်း မ တူ လို့့ မိ ဘ မောင် နှ မ
တွေ လည်း သ ဘော တူ မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ ချစ် ခွင့် တောင်း ထား ကြ တဲ့ သူ တွေ တော့ ရှိ ကြောင်း၊ ဒါ ပေ မဲ့ ဘယ် သူ့ကို မှ အ ဖြေ မ ပေး သေး ကြောင်း ၊ မိ
ဘ တွေ က ဆင်း ရဲ လို့အ လုပ် ကို ဘဲ အ ဓိ က ထား နေ ကြောင်း၊ အ ချစ် ရေး၊ အိမ် ထောင် ရေး တွေ ကို မ စဉ်း စား ချင် သေး ကြောင်း သ မီး က တောင်း ပန် ခဲ့ ပါ တယ်
။ ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို လည်း သ မီး နဲ့အ ရင် အ လုပ် လုပ် ခဲ့ ဘူး တဲ့ ( ကူ ၀ိတ် ) နိုင် ငံ ကို ရောက် နေ တဲ့ ( ချင်း ) မ လေး နဲ့ရော၊ ထိုင်း နိုင် ငံ
ဘန် ကောက် မှာ အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ တ က္က သိုယ် တုံး က ကျောင်း နေ ဘက် သူ ငယ် ချင်း ( က ရင် မ လေး) နဲ့ရော၊ တိုင် ပင် ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ ငယ် ချင်း ၂ ယောက်
လုံး က လည်း သ မီး လို ဘဲ ခ ရစ် ယာန် တွေ ဆို တော့ သ ဘော မ တူ ကြ ပါ ဘူး ။ ဘာ သာ ချင်း လည်း မ တူ လို့၊ အ ပြင် မှာ လည်း တ ခါ မှ မ မြင် ဘူး မ တွေ့ ဘူး သေး
တဲ့ အ တွက် အ ဖြေ မ ပေး ဘို့ ၊့ မိတ် ဆွေ သ ဘော မျိုးဘဲ ဆက် ဆံ ဘို့အ ကြံ ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ သ မီး က က ရင် လူ မျိုး ၊ ခ ရစ် ယာန် ဘာ သာ ကိုး ကွယ် ပါ တယ်
။ ကောင် လေး က တော့ ဗု ဒ္ဒ ဘာ သာ ကိုး ကွယ် တဲ့ တိုင်း ရင်း သား တ ယောက် ပါ ။ သ မီး က အ ဖြေ မ ပေး တော့ ကောင် လေး က သ မီး ဆီ ဖုံး တွေ အ မြဲ လို ဆက် ပြီး သ
မီး ကို တ ကယ် ချစ် သွား မိ သွား တဲ့ အ ကြောင်း ၊ သူ့ဘ ၀ မှာ သ မီး လို ရိုး သား တဲ့ မိန်း ခ လေး မျိုး တ ခါ မှ မ တွေ ခဲ့ ဘူး ကြောင်း ၊ အ ပျော် သ ဘော
မျိုး ချစ် တာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း ၊ တ ကယ် လက် ထပ် ယူ မဲ့ အ ကြောင်း ၊ ၊ လက် ထပ် ပြီး ရင် လည်း သူ နေ နိုင် ငံ မှာ လာ နေ ဘို့့ အ ကြောင်း ၊ သူ့မှာ
လည်း ကိုယ် ပိုင် အိမ် ၊ ကိုယ် ပိုင် ကား တွေ ရှိ တဲ့ အ ကြောင်း ၊ သေ တဲ့ အ ထိ သ စ္စာ ရှိ ရှိ နဲ့ချစ် သွား မဲ့ အ ကြောင်း ၊ ဖုံး တွေ ဆက် ပြီး ပြော ပြ
လာ ပါ တယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ သ မီး က အ တန် တန် ငြင်း ပြီး တောင်း ပန် ခဲ့ ပါ တယ်။
ကောင် လေး က လည်း အ တင်း ကြီး အ ဖြေ တောင်း လာ တော့ ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို သ မီး ရဲ့သူ ငယ် ချင်း ၂ ယောက် နဲ့ရန် ကုန် က သ မီး ရဲ့အ ဒေါ် ဆီ ကို လည်း ထပ်
ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး အ ဒေါ် နဲ့သူ ငယ် ချင်း တွေ က လည်း ဘာ သာ မ တူ လို့ရိုး ရိုး မိတ် ဆွေ သ ဘော မျိုး ဘဲ ဆက် ဆံ ဘို့့ အ တန် တန် ကို သ တိ ပေး ခဲ့
ပါ တယ် ။ အ ဒေါ် နဲ့သူ ငယ် ချင်း တွေ က လည်း သ ဘော မ တူ တော့ သ မီး လည်း ကောင် လေး ကို ငြင်း ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး ဆီ က အ ဖြေ မ ရ တော့ ကောင် လေး က လည်း နေ့ 
တိုင်း လို သ မီး ဆီ ဖုံး တွေ ဆက် ပြီး အ ဖြေ တောင်း လာ တော့ သ မီး လည်း ကောင် လေး ကို အ ရမ်း ကို သ နား လာ မိ ပါ တယ်။ သ မီး လုပ် နေ တဲ့ မ လေး ရှား က အ
လုပ် က လည်း အ ရမ်း ကို ပင် ပန်း ပြီး လ ခ က လည်း တ လ ကို မှ မ လေး ရှား ငွေ ( ရင်း ဂစ် ၁၃၀၀ ) ကျော် ၀န်း ကျင် လောက် ဘဲ ရ တယ် ၊ မြန် မာ ငွေ နဲ့ဆို တ လ
ကို ၃ သိန်း ခွဲ၊ ၄ သိန်း လောက် ဘဲ ရ ပါ တယ်။ ကောင် လေး က လည်း အ ပြင် မှာ တ ခါ မှ မ တွေ့ ဘူး တာ တောင် သ မီး ဆီ သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ က နေ ခ ဏ ခ ဏ ဖုံး တွေ ဆက်
ပြီး အား ပေး စ ကား တွေ ပြော၊ သ မီး အ ပေါ် မှာ လည်း အ ရမ်း ကို ဂ ရု စိုက် ပါ တယ်။ လက် ထပ် ပြီး တာ နဲ့သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို ခေါ် ပေး မယ် ဆို တဲ့ အ
ကြောင်း ၊ သူ့မှာ ကိုယ် ပိုင် အိမ် နဲ့ကား တွေ တွေ လည်း ရှိ နေ ပြီး သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ မှာ အ လုပ် တွေ လည်း အ ရမ်း ပေါ် ပြီး ခ လ လည်း အ ရမ်း ကောင်း တယ်
ဆို တဲ့ အ ကြောင်း၊ သူ့ဘ ၀ မှာ လည်း သ မီး လို ရိုး သား တဲ့ မိန်း ခ လေး မျိုး တ ခါ မ တွေ့ခဲ့ ဘူး လို့အိမ် ထောင် ပြု ဘို့အ ထိ ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ တာ
ဖြစ် ကြောင်း၊ ဂ တိ တွေ လည်း ပေး လာ တော့၊ ကောင် လေး အ ပေါ် အ ရမ်း ကို အ ထင် ကြီး လေး စား ပြီး သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို လည်း အ ရမ်း သွား ချင် စိတ် တွေ ဖြစ်
လာ တယ်။ ကောင် လေး အ ပေါ် မှာ လည်း တ ကယ့် ကို အား ကိုး ချင် တဲ့ စိတ် တွေ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် ကောင် လေး ပြော သ မျှ ကို အ ကုန် ယုံ ပြီး ဘယ် သူ့ 
ကို မှ မ တိုင် ပင် တော့ ဘဲ အ ဒေါ် တွေ တား နေ တဲ့ ကြား က နေ ကောင် လေး တောင်း တဲ့ အ ဖြေ ကို ( ၂၀၁၀ ခု ဧ ပြီ လ ဆန်း ) မှာ ပေး လိုက် မိ ပါ တယ် ။ ကောင် လေး
က လည်း သ မီး ဆီ က အ ဖြေ ရ တော့ အ ရမ်း ပျော် တဲ့ အ ကြောင်း ၊ သ မီး ကို လည်း ကျေး ဇူး အ ရမ်း တင် တဲ့ အ ကြောင်း ၊ တ သက် လုံး သ စ္စာ ရှိ ရှိ နဲ့ချစ် သွား
မဲ့ အ ကြောင်း၊ တ သက် လုံး ဂ ရု စိုက် သွား မဲ့ အ ကြောင်း ၊ ဂ တိ တွေ ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ သ မီး ကို လည်း သူ တ ယောက် ထဲ ကို ဘဲ သ စ္စာ ရှိ ရှိ နဲ့တ သက် လုံး
ချစ် ရ မဲ့ အ ကြောင်း ဂ တိ တွေ တောင်း ခဲ့ ပါ တယ် ။ သ မီး ဆီ လည်း အင် တာ နက် က နေ အ မြဲ လို ဆက် သွယ် ၊ ဖုံး တွေ လည်း အ မြဲ လို ဆက် ၊ နောက် ပြီး သ မီး ဆီ
ကို စာ တိုက် က နေ ပါ ဆယ် နဲ့လက် ဆောင် ပ စ္စည်း တွေ လည်း မ ကြာ မ ကြာ ပို့့ ပေး လာ ပါ တယ်။ ကောင် လေး က လည်း အ ရမ်း ကို အ ပြော ကောင်း ပြီး အ ရမ်း ကို ဂ
ရု စိုက် တော့ သ မီး က လည်း အ ရမ်း ကို ယုံ ကြည် အား ကိုး မိ ပြီး ကောင် လေး အ ပေါ် လည်း တ ကယ့် ကို ချစ် မိ သွား ပါ တယ်။ အင် တာ နက် လိပ် စာ ကို တောင် သ မီး
နာ မည် တ ၀က် သူ့နာ မည် တ ၀က် နဲ့တ ယောက် တ ခု ဆီ လုပ် ပြီး သ မီး နဲ့အ မြဲ ဆက် သွယ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။
ချစ် သူ တွေ ဖြစ် ပြီး ၁ လ ကျော် လောက် နေ တော့ ကောင် လေး က သ မီး နေ တဲ့ မ လေး ရှား ကို လည်း တ ခါ မှ မ ယောက် ဖူး လို့့ လာ လည် ချင် တဲ့ အ ကြောင်း၊
ကိုယ် နဲ့လက် ထပ် မဲ့ ချစ် သူ ကို လည်း အ ပြင် မှာ အ ရမ်း တွေ့ ဘူး ချင် တဲ့ အ ကြောင်း၊ တ ယောက် နဲ့တ ယောက် လည်း အ နီး ကပ် လေ့ လာ ချင် တဲ့ အ ကြောင်း၊ ခ
ဏ ခ ဏ ပြော လာ ပါ တယ်။ လက် ထပ် ဖို့အ ထိ ဂ တိ တွေ တောင် ပေး ထား ကြ တဲ့ ချစ် သူ တွေ လည်း ဖြစ် နေ ကြ ပြီး ဆို တော့ သ မီး လည်း ကောင် လေး ကို အ ပြင် မှာ
လည်း တွေ့ဘူး ချင် တယ်။ ကောင် လေး နဲ့လက် ထပ် ပြီး ရင် လည်း သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို လည်း အ ရမ်း သွား ချင် တဲ့ စိတ် တွေ ဖြစ် လာ ပြီး လက် ခံ ပေး
လိုက် ပါ တယ် ။ ကောင် လေး လည်း သ မီး နေ တဲ့ မ လေး ရှား ကို (၂၀၁၀ ခု နှစ် မေ လ ကုန် လောက် ) မှာ ရောက် လာ ပါ တယ် ။ သ မီး ကိုယ် တိုင် လေ ဆိပ် မှာ သွား
ကြို ပေး ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး အ တွက် လည်း လက် ဆောင် ပ စ္စည်း တွေ အ များ ကြီး ၀ယ် လာ ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ သ မီး လည်း ကောင် လေး မ လာ ခင် ထဲ က အ လုပ် က နေ ၂ ပါတ်
ခွင့် ယူ ခဲ့ ပါ တယ်။ ကောင် လေး နဲ့အ တူ မ လေး ရှား မှာ ၂ ပါတ် လောက် နေ ရာ အ စုံ လျှောက် လည် ကြ ပါ တယ်။ သ မီး ကို လည်း ပြော ပါ တယ်။ သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ
မှာ နိုင် ငံ သား လျှောက် ထား တဲ့ အ ကြောင်း၊ မ ကြာ ခင် နိုင် ငံ သား ရ တော့ မဲ့ အ ကြောင်း၊ နိုင် ငံ သား ကျ တာ နဲ့တ ရား ၀င် လက် ထပ် ပြီး သူ့နိုင် ငံ
ကို ခေါ် မဲ့ အ ကြောင်း၊ သူ့မိ ဘ တွေ က သ ဘော မ တူ ခဲ့ ရင် တောင် သ မီး ကို တ ရား ၀င် လက် ထပ် ယူ မဲ့ အ ကြောင်း ၊ သ မီး ရဲ့မောင် နှ မ တွေ ကို ပါ သူ့ 
နိုင် ငံ ကို ခေါ် ပေး မဲ့အ ကြောင်း၊ ပေး ခဲ့ တဲ့ ဂ တိ တွေ ကို ဘယ် တော့ မှ ဖျက် မှာ မ ဟုတ် ကြောင်း၊ သ မီး လို ရိုး သား တဲ့ တိုင်း ရင်း သူ လေး တ ယောက်
ရဲ့အ ချစ် ကို ရ တဲ့ အ တွက် အ ရမ်း ကို ကံ ကောင်း တဲ့ အ ကြောင်း ၊ သ မီး တို့ ခ ရစ် ယာန် ဘာ သာ ကို လည်း လေ့ လာ နေ ကြောင်း၊ သ မီး ကို ပြော ပြ ပါ တယ်။
ကောင် လေး နဲ့အ တူ မ လေး ရှား မှာ နေ ရာ အ စုံ လျှောက် လည် ကြ ပြီး ကောင် လေး လည်း သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို ( ၂၀၁၀ ခု နှစ် ဇွန် လ မှာ ) ပြန် သွား ခဲ့ ပါ
တယ်။ သ မီး ကိုယ် တိုင် လေ ဆိပ် အ ထိ လိုက် ပို့ပေး ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး ကို လည်း မ ပြန် ခင် ရွေလက် စွပ် လေး တ ကွင်း ၀ယ် ပြီး စေ့ စပ် လက် ဆောင် ပေး ခဲ့
ပါ တယ်။ သူ့နိုင် ငံ ပြန် ရောက် တော့ အ ရင် လို ဘဲ သ မီး ဆီ ကို ဖုံး တွေ တော့ ဆက် လာ ပါ တယ် ။ သ မီး က လည်း ကောင် လေး ဆီ အ ဖြေ ပေး ပြီး က တည်း က မိ ဘ
မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး တွေ ဆီ ကို အ ရင် လို သိပ် အ ဆက် အ သွယ် မ လုပ် ဖြစ် တော့ ပါ ဘူး ။ ကောင် လေး ကို အ ဖြေ ပေး လိုက် တဲ့ အ ကြောင်း နဲ့ကောင် လေး ( မ လေး
ရှား ) ကို လာ လည် သွား တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ကို တော့ ဘယ် သူ့ကို မှ မ ပြော ပြ ခဲ့ ပါ ဘူး ။ သူ ငယ် ချင်း တွေ၊ အ ဒေါ် တွေ သိ သွား ရင် လည်းသ ဘော တူ ကျ မှာ မ
ဟုတ် လို့ ၊ နောက် ပြီး အ ဒေါ် က လည်း ဆူ ပြီး အ တင်း အ ဆက် အ သွယ် ဖြတ် ခိုင်း မှာ စိုး ရိမ် လို့ ပါ။ သ မီး ဆီ က ချစ် ခွင့် တောင်း ခံ ထား ကြ တဲ့ စ ကာင်္ ပူ
နဲ့ မ လေး ရှား မှာ အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ သူ တွေ ကို လည်း ကောင် လေး နဲ့တွေ့ပြီး က တည်း က လုံး ၀ အ ဆက် အ သွယ် ဖြတ် လိုက် ပါ တယ်။ သ မီး က လည်း ကောင် လေး
ကို အ ရမ်း ချစ် သွား မိ တော့ အ လုပ် ထဲ မှာ စိတ် မ ပါ တော့ ဘဲ ကောင် လေး ရဲ့ ဖုံး ကို ဘဲ အ မြဲ မျှော် ရ ပါ တော့ တယ် ။ ကောင် လေး ဆီ က တ နေ့ဖုံး မ လာ ခဲ့
ရင် သ မီး က မ လေး ရှား က နေ ကောင် လေး ဆီ ဖုံး ပြန် ဆက် ရ ပါ တော့ တယ် ။ ပြော ရ မှာ တော့ အ ရမ်း ကို ရှက် ပါ တယ် ။ ကောင် လေး ပြန် သွား ပြီး မ ကြာ ပါ ဘူး ၊
သ မီး မှာ ကိုယ် ၀န် ရှိ လာ ပါ တယ် ။ သ မီး လည်း ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို ကောင် လေး ဆီ ကို ဖုံး နဲ့ရော၊ အင် တာ နက် က နေ ပါ အ ကြောင်း ကြား တော့ ဘာ မှ
စိတ် မ ပူ ဘို့ အ ကြောင်း ၊ ဘယ် တော့ မှ သ စ္စာ ဖေါက် မဲ့ လူ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ မြန် မာ ပြည် က အ ရမ်း ရိုး သား တဲ့ တိုင်း ရင်း သူ လေး တ ယောက် နဲ့ချစ် သူ
တွေ ဖြစ် နေ ကြ ပြီး ဆို တဲ့ အ ကြောင်း၊ သူ ရဲ့့ မိ ဘ တွေ ကို လည်း ပြော ထား ပြီး တဲ့ အ ကြောင်း ၊ မိ ဘ သ ဘော မ တူ ခဲ့ ရင် လည်း ဂ ရု စိုက် မှာ မ ဟုတ် တဲ့
အ ကြောင်း၊ ခွင့် ရ တာ နဲ့ချက် ချင်း လာ ပြီး လက် ထပ် မှာ ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း ပြော ပါ တယ် ။ နောက် ပိုင်း တ ဖြည်း ဖြည်း ကောင် လေး ဆီ က ဖုံး အ ဆက် အ သွယ်
မ ရ တော့ ပါ ဘူး ။ အင် တာ နက် က နေ ဆက် သွယ် တော့လည်း အ ကြောင်း မ ပြန် တော့ ပါ ဘူး ။ ကောင် လေး နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို ဖုံး ဆက် တော့ လည်း ဆက် သွယ် လို့မ
ရ တော့ ပါ ဘူး။
ကောင် လေး ဆီ က အ ဆက် အ သွယ် မ လုပ် ဘဲ ကြာ လာ တော့ သ မီး လည်း အ ရမ်း စိတ် ပူ လာ ပါ တယ် ။ ဒီ လို ကိုယ် ၀န် အ တွေ့အ ကြုံ မျိုး လည်း သ မီး ဘ ၀ မှာ တ ခါ မှ
မ ရှိ ခဲ့ ဘူး တော့၊ မြန် မာ သူ ငယ် ချင်း တွေ လည်း အ နား မှာ တ ယောက် မှ မ ရှိ တော့၊ ဘာ လုပ် ရ မှန်း မ သိ တာ နဲ့သူ ငယ် ချင်း( ချင်း) ကောင် မ လေး နဲ့ ( က
ရင် ) မ လေး တွေ ဆီ ကို ဖုံး ဆက် ပြီး အ ကြောင်း စုံ ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ ငယ် ချင်း တွေ က လည်း သ မီး ကို အ ရမ်း ကို အ ပြစ် တင် ကြ ပါ တယ် ။ မ ခံ မ ရပ်
နိုင် လို့ ( ချင်း ) မ လေး ကိုယ် တိုင် သ မီး ဆီ က ကောင် လေး ရဲ့ဖုံး နဲ့အင် တာ နက် လိပ် စာ တွေ တောင်း ပြီး ကောင် လေး ဆီ ဖုံး နဲ့ရော ၊ အင် တာ နက်
နဲ့ရော ဆက် သွယ် ခဲ့ ပေ မဲ့ ဘယ် လို မှ ကို ဆက် သွယ် လို့မ ရ တော့ ( ချင်း မ လေး ) က လည်း သ မီး ကို အား ပေး စ ကား တွေ ပြော ပြီး သူ အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ ( ကူ ၀ိတ် နိုင် ငံ )
က နေ တ ဆင့် ( အင်း စိန် ) က သ မီး ရဲ့အ ဒေါ် တွေ ဆီ ဖုံး ဆက် ပြီး အ ကျိုး အ ကြောင်း အ ကုန် ပြော ပြ လိုက် ပါ တယ် ။ သ မီး အ ဒေါ် တွေ က
လည်း အ ရမ်း စိတ် ပူ ကုန် ပြီး ကျ မ နေ တဲ့ ( ဖါး အံ ) ကို ဖုံး လှမ်း ဆက် ပြီး သ မီး ရဲ့အ ကြောင်း စုံ ကို ပြော ပြ လာ ပါ တယ် ။ သ မီး အ ကြောင်း တွေ
ကို ကြား ရ တော့ ကျ မ အ ရမ်း ကို စိတ် ထိ ခိုက် ပြီး သ မီး လေး အ တွက် သေ မ တတ် ကို ခံ စား လိုက် ရ ပါ တယ် ။ သ မီး လေး က အ ရမ်း ကို လိမ် မာ ပြီး ရိုး အ တော့
ကိုယ့် နား တောင် ကိုယ် မ ယုံ ပါ ဘူး ၊ အ ခု လို ပြ သာ နာ မျိူး တွေ ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် လို့ လည်း လုံး ၀ ကို မ ထင် ထား ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ သ မီး ဒီ လောက်
မိုက် လုံး ကြီး လိမ့် မယ် လို့ လည်း လုံး ၀ ကို မ ထင် ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ အင် တာ နက် ပေါ် မှာ တွေ့တဲ့ လူ တ ယောက် ကို ဒီ လောက် မြန် မြန် ကြီး အ ဖြေ တွေ ပေး
ပြီး လူ ကြီး တွေ ကို အ သိ မ ပေး ဘဲ ၂ ယောက် ထဲ လွတ် လွတ် လပ် လပ် တွေ့့ ကြ လိမ့် မယ် လို့လည်း မ ထင် မိ ခဲ့ မိ ပါ ဘူး ။ ကျ မ လည်း သ တင်း ကြား ကြား
ချင်း ရန် ကုန် တက် လာ ပြီး သ မီး ဆီ ကို ဖုံး ဆက် တော့ သ မီး လေး က ငို ယို ပြီး အ ကြောင်း စုံ ရှင်း ပြ ပါ တော့ တယ် ။ ကျ မ လည်း ရင် ထဲ မှာ အ ရမ်း ကို
နစ် နေ အောင် ခံ စား ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။ နောက် ဆုံး သ မီး လေး စိတ် ဆင်း ရဲ ပြီး တ ခု ခု လုပ် လိုက် မှာ စိုး ရိမ် လို့သ မီး ကို အား ပေး စ ကား တွေ ပြော ပြီး
ရန် ကုန် က သ မီး အ ဒေါ် ကိုယ် တိုင် ( နိုင် ငံ ကူး လက် မှတ် ) ကို ၁၀ ရက် နဲ့ အ မြန် ရ အောင် နိုင် ငံ ကူး လက် မှတ် ရုံး က အ ရာ ရှိ တွေ ကို အ ကျိုး အ
ကြောင်း တွေ ရှင်း ပြ ပြီး အ မြန် ကြေး ပေး ပြီး သ မီး ဆီ လိုက် သွား ပြီး ( ၂၀၁၀ ခု သြ ဂုတ် လ မှာ ) သ မီး ကို မြန် မာ ပြည် ပြန် ခေါ် လာ ခဲ့ရ ပါ တော့
တယ် ။ သ မီး အ ဖေ က လည်း ကိုယ် တ ခြမ်း လေ ဖြတ် ပြီး အိပ် ယာ ထဲ လဲ နေ တာ ၃ နှစ် လောက် ရှိ ပါ ပြီ ။ ကျောက် ကပ် နဲ့နှ လုံး ရော ဂါ တွေ လည်း ရှိ ပါ တယ်
။ သ မီး အ ကြီး ဆုံး က အ သက် ၂၈ နှစ် ပါ။ အိမ် ထောင် ကျ တာ ၅ နှစ် လောက် ရှိ ပါ ပြီ ။ သူ့အ မျိုး သား က လည်း က ရင် ပြည် နယ် ( ကော့ ရင်း ) ရွာ က ယာ ခင်း
တ ခု မှာ အ လုပ် လုပ် ပါ တယ်။ စီး ပွား ရေး တော့ သိပ် အ ဆင် မ ပြေ ပါ ဘူး ။ ဒု တိ ယ သား လေး က အ သက် ၂၆ နှစ် ပါ။ မြ ၀ တီ မြို့က ကောင် မ လေး တ ယောက် နဲ့ 
အိမ် ထောင် ကျ ပြီး ဈေး ထဲ မှာ ကုန် စုံ ဆိုင် လေး ဖွင့် ထား ပါ တယ် ။ အ ခု ပြ သာ နာ ဖြစ် တဲ့ သ မီး က တ တိ ယ ပါ ။ အ သက် ၂၂ နှစ် ပါ။ သူ့အောက် မှာ သား တ
ယောက်၊ သ မီး တ ယောက် ရှိ ပါ တယ် ။ ကျောင်း သား တွေ ပါ ။ ဒီ သ မီး နဲ့သား လေး ၂ ယောက် ဘဲ မိ ဘ မောင် နှ မ တွေ အား လုံး ကို ထောက် ပံ ပေး နေ ကြ တာ ပါ ။ သ
မီး လေး အ ခု လို ဖြစ် သွား ရ တာ ရင် ကွဲ မ တတ် ကို ခံ စား ရ ပါ တယ် ရှင် ။ ကျ မ တို့လည်း သ မီး ဆီ က ကောင် လေး ဖုံး နံ ပါ တ် နဲ့အင် တာ နက် လိပ် စာ
တောင်း ပြီး ကောင် လေး ဆီ ကို ဆက် သွယ် ခဲ့ ပေ မဲ့ လုံး ၀ ကို ဆက် သွယ် လို့မ ရ တော့ ပါ ဘူး။ ဒီ လောက် တောင် သ မီး ကို ချစ် ပါ တယ် ၊ လက် ထပ် ပါ မယ် ၊
မိ ဘ တွေ သ ဘော မ တူ ခဲ့ ရင် တောင် လက် ထပ် ပြီး သ မီး တို့ဘာ သာ ထဲ ကို ၀င် ပါ မယ် လို့ဂ တိ တွေ ပေး ထား တော့ သ မီး က လည်း ကောင် လေး ကို အ ရမ်း ယုံ
ကြည် ပြီး သ မီး အ ပေါ် ဘယ် တော့ မှ ဒီ လို မျိုး လုပ် မှာ မ ဟုတ် ဖူး လို့ယုံ ကြည် နေ ကြ တုံး ပါ ဘဲ ။ အ စ ပိုင်း တော့ ကျ မ တို့အား လုံး လည်း သ မီး လို
ဘဲ ထင် ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။
ကောင် လေး က တ ခြား နိုင် ငံ ကို များ အ လုပ် ကိ စ္စ နဲ့ပြောင်း သွား လို့များ သ မီး ဆီ အ ဆက် အ သွယ် မ လုပ် ဖြစ် တာ လား ၊ ကျန်း မာ ရေး မ ကောင်း လို့ 
ကြောင့် များ လား ၊ အ ရေး တ ကြီး တ ခြား အ ကြောင်း တွေ များ ရှိ နေ လို့သ မီး ကို အ ဆက် အ သွယ် မ လုပ် တာ လား ၊ ကောင် လေး က လည်း သ မီး နဲ့ရီး စား ဖြစ်
နေ တဲ့ အ ကြောင်း သူ့မိ ဘ တွေ ကို လည်း အ သိ ပေး ထား ပြီး ကြောင်း သ မီး ကို လည်း ပြော ပြ ထား ဘူး တယ်၊ မ လေး ရှား ကို လာ လည် တုံး က လည်း ကောင် လေး မိ ဘ
တွေ ရဲ့လိပ် စာ တွေ ကို သ မီး က တောင်း ခဲ့ ဘူး တော့ ကောင် လေး မိ ဘ တွေ နဲ့တွေ့ပြီး ကောင် လေး သ တင်း ကို လည်း စုံ စမ်း ချင် လို့၊ သ မီး တို့ လူ
ငယ် တွေ အ ကြောင်း၊ သ မီး မှာ ကိုယ် ၀န် ရ နေ တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ကို လည်း သူ့မိ ဘ တွေ ကို အ သိ ပေး သင့် တယ် လို့ယူ ဆ ပြီး ရန် ကုန် က ကောင် လေး ရဲ့မိ
ဘ တွေ နေ တဲ့ အိမ် ကို စုံ စမ်း ပြီး သွား ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။ ကျ မ နဲ့အ တူ သ မီး ရော ၊ အင်း စိန် မှာ နေ တဲ့ သ မီး အ ဒေါ် ရော၊ သူ့အ မျိုး သား ရော ၊ ကျ မ
တို့ဘု ရား ကျောင်း က သင်း အုပ် ဆ ရာ ကြီး ကို ပါ ခေါ် သွား ခဲ့ ပါ တယ်။ သူ့မိ ဘ တွေ နဲ့တွေ့တော့ ၀င် ခွင့် တောင်း ပြီး သ မီး တို့ ရဲ့အ ဖြစ် အ
ပျက် အ သေး စိတ် ကို ကျ မရော ၊ သ မီး ရော ၊ သ မီး အ ဒေါ် ရော အ သေး စိတ် ရှင်း ပြ ပါ တယ် ။ ကောင် လေး သ မီး ဆီ အင် တာ နက် က နေ ပို့ထား ဘူး တဲ့ စာ
တွေ၊ ကောင် လေး ပေး ထား တဲ့ စေ့ စပ် လက် စွပ် တွေ လည်း ပြ လိုက် ပါ တယ်။ ကျ မ တို့ပြော ပြ တာ တွေ ကို နား ထောင် ပြီး ကောင် လေး ရဲ့မိ ဘ တွေ က အ ရမ်း ကို
ဒေါ သ တွေ ဖြစ် ကုန် ကြ ပါ တယ် ။ သူ တို့လူ ကြီး တွေ ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို လုံး ၀ မ သိ တဲ့ အ ကြောင်း ၊ သ မီး ကို လည်း လုံး ၀ မ သိ တဲ့ အ ကြောင်း ၊ အင်
တာ နက် က နေ ပြီး နိုင် ငံ တ ကာ က ယော င်္ကျား လေး တွေ နဲ့ အ ဆက် အ သွယ် လုပ် ၊ ယော ကျာင်္း တ ကာ နဲ့ချိန်း တွေ့ပြီး ရှုပ် လို့ရ ခဲ့ တဲ့ ကိုယ် ၀န် ကို သူ
့ သား နဲ့လာ ပြီး စွတ် စွဲ တဲ့ အ တွက် ၊ သူ့သား ကို အ မိ ဖမ်း တဲ့ အ တွက် အ သ ရေ ဖျက် မူ နဲ့တ ရား စွဲ မဲ့ အ ကြောင်း၊ မင်း တို့ သ မီး လို အင် တာ နက်
က နေ ပြီး တွေ့သ မျှ ယော ကျာင်္း လေး တွေ နဲ ရီး စား ထား ပြီး ရူပ် နေ တဲ့ က ရင် မ မျိုး ကို ငါ တို့ သား က ကြိုက် ခဲ့ ရင် တောင် လုံး ၀ သ ဘော တူ နိုင် မှာ
မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း ၊ နောက် တ ခေါက် ထပ် လာ ခဲ့ ရင် အ သ ရေ ဖျက် မှု့နဲ့ရဲ စ ခန်း မှာ တိုင် မဲ့ အ ကြောင်း ၊ သူ့သား ကို လည်း သူ တို့ လူ မျိုး ထဲ က
လူ ကုံ တန် အ မျိုး သ မီး တ ယောက် နဲ့သ ဘော တူ ထား ကြောင်း၊ ကျ မ တို့ကို နှစ် ပြား မ တန် အောင် ပြော ပြီး မောင်း ထုတ် ကြ ပါ တယ် ။ ကျ မ နဲ့သ မီး ဆို
ရင် အ ရမ်း ကို ရှက် လွန်း လို့ ဝမ်း နည်း ပြီး မျက် ရည် တွေ ကျ ရ ပါ တယ်။ ကျ မ တို့နဲ့ပါ လာ တဲ့ သင်း အုပ် ဆ ရာ ကြီး နဲ့သ မီး အ ဒေါ် လည်း အ ရမ်း ကို
ရှက် ပြီး ဒေါ သ တွေ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။ ကျ မ တို့လည်း အ ရမ်း ကို အ ရှက် ရ ပြီး ပြန် လာ ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။ ကျ မ သ မီး တင် မ က ပါ ဘူး ၊ ကျ မ တို့ရဲ့အ
မျိုး ဘာ သာ သာ သ နာ ကို ပါ စော် ကား ခံ လိုက် ရ တာ ပါ ။ ကျ မ တို့လည်း ရှက် ရှက် နဲ့ရွာ ကို ပြန် လာ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် စဉ် တွေ ကို သ မီး ရဲ့အ ဖေ နဲ့ 
မောင် နှ မ၊ ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ နဲ့ရွာ က ရင်း နှီး ကြ တဲ့ မိတ် ဆွေ တွေ က အ တင်း မေး လာ လို့အ သေး စိတ် ရှင်း ပြ လိုက် ပါ တယ်။ သ မီး အ ဖေ လည်း
ဒီ အ ကြောင်း တွေ ကို သိ သွား တော့ အ ရမ်း ကို ရှက် ပြီး၊ နှ လုံး ရော ဂါ အ ခံ လည်း ရှိ တော့ စိတ် ထိ ခိုက် ပြီး ဆုံး ပါး သွား ပါ တယ် ။ လူ မ ဆန် တဲ့ လူ တ
ယောက် ကြောင့် အ ပြစ် မဲ့ တဲ့ သ မီး လေး ဘ ၀ လည်း ပျက် ခဲ့ ရ ပြီး ကျ မ ရဲ့အ ပြစ် မဲ့ တဲ့ လင် ယော ကျာင်္း ပါ အ သက် ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ပါ တယ်။ ကျ မ တို့ရဲ
့ မျိုး ရိုး သိ က္ခာ ကို လည်း အ စော် ကား ခံ ရ ပါ တယ်။
သ မီး လေး နဲ့ကျ မ တို့အ ပေါ် ကောင် လေး ရော ၊ ကောင် လေး မိ ဘ တွေ က ပါ အ ရမ်း ကို စော် ကား လာ တော့ မ ခံ မ ရပ် နိုင် လွန်း လို့ ( ဖါး အံ မြို )့ က ရဲ
စ ခန်း မှာ အ မှု့ဖွင့် ဘို့စီ စဉ် ကြ ပါ တယ်။ ( ဖါး အံ) ရဲ စ ခန်း က စ ခန်း မှုး က ဒီ အ မှု က နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် မှာ ဖြစ် ပျက် ခဲ့ လို့ ၊ သ
မီး က လည်း နိုင် ငံ ခြား မ သွား ခင်( အင်း စိန် ) မှာ နေ ခဲ့ လို့ရန် ကုန် မှာ ဘဲ အ မှု ဖွင့် ဘို့အ ကြံ ပေး လာ ပါ တယ်။ ကျ မ တို့လည်း ရဲ စ ခန်း မှာ
အ မှု မ ဖွင့် ခင် သင်း အုပ် ဆ ရာ ကြီး နဲ့ အ ရမ်း ရင်း နှီး တဲ့ အင်း စိန် ( စီ အိုင် ဒီ ) က ရဲ မှုး ကြီး အိမ် ကို ည ဘက် သွား ပြီး သ မီး ရဲ့ အ ဖြစ် အ
ပျက် အ လုံး စုံ ကို ရဲ မှုး ကြီး ကို ကျ မ ရော၊ သ မီး ကိုယ် တိုင် ရော အ သေး စိတ် ပြော ပြ ခဲ့ ပါ တယ်။ ရဲ မှုး ကြီး က သ မီး ပြော ပြ ခဲ့ သ မျှ ကို နား
ထောင် ပြီး သ မီး အ ပေါ် မှာ အ ရမ်း ကို သ နား သွား ခဲ့ ပါ တယ်။ သ မီး ကို လည်း ဂ ရု ဏာ စိတ် နဲ အ ရမ်း ကို အ ပြစ် တင် ပြီး ဆူ ပါ တယ်။ ကောင် လေး ရဲ့လုပ်
ရပ် နဲ့ပါတ် သက် ပြီး လည်း အ ရမ်း ကို လူ မ ဆန် တဲ့ လုပ် ရပ် ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ သ မီး ရဲ့ကောင် လေး ဟာ အ မျိုး သ မီး တွေ နဲ့ပါတ် သက် ပြီး အ ရမ်း
ကို အ တွေ့အ ကြုံ ရင့် ကျက် တဲ့ လူ စား မျိုး ဖြစ် ကြောင်း၊ သ မီး လို ရိုး အေး ပြီး အ တွေ့အ ကြုံ မ ရှိ တဲ့ မိန်း ခ လေး မျိုး မ ပြော နဲ့အိမ် ထောင်
ရှိ တဲ့ မိန်း ခ လေး မျိုး တောင် ကျ အောင် ရေး နိုင် ပြော နိုင် ကြောင်း၊ သ မီး တို့ထက် လယ် လို့လည်း နိုင် ငံ ကြီး တ ခု မှာ အ ခြေ ချ နိုင် တာ ဖြစ် တဲ့
အ ကြောင်း ၊သ မီး ကို ရေး ထား တဲ့ စာ တွေ အ ရ ရော၊ သ မီး ပြော ပြ ချက် တွေ အ ရ ရော၊ သူ့မိ ဘ လိပ် စာ အ မှန် တွေ ကို ပါ ပေး ထာ တာ ကို လေ့ လာ ကြည့် ရင် လူ
လိမ် လူ ညာ တ ယောက် လို့တောင် လုံး ၀ မ ထင် ရ ကြောင်း၊ ရိုး သား ပြီး အ တွေ့အ ကြုံ နည်း တဲ့ မိန်း ခ လေး တော် တော် များ များ ကို လည်း သ မီး လို ပုံ စံ
မျိုး နဲ့ဘဲ ယုံ ကြည် မှု ရ့ အောင် လုပ် ၊ ချစ် ခွင့် ရ အောင် တောင်း၊ မိန်း ခ လေး တွေ က သူ့အ ပေါ် မှာ ယုံ ကြည် ပြီး အ ရူး အ မူး ဖြစ် လာ တော့ မှ
အ ပြင် မှာ ချိန်း တွေ့ခွင့် ရ အောင် လုပ် ပြီး ဖျက် ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ လည်း နဲ မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ မိန်း ခ လေး တော် တော်
များ များ က လည်း သူ့အ ပြော ထဲ မှာ ညိ ပြီး နိုင် ငံ ခြား သွား ချင် စိတ် နဲ့သူ လုပ် သ မျှ ငြင်း ဆန် မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ သ မီး က ဓါတ် ပုံ တွေ ထဲ
မှာ ကြည့်ကောင်း ပေ မဲ့ အ ပြင် မှာ တော့ ဓါတ် ပုံ ထဲ က လို မျိုး မ လှ လို့ ၊ သူ့စိတ် ကြိုက် ပုံ စံ မျိုး မ ဟုတ် လို့ ၊ သူ့ ရဲ့အ လို ဆ န္ဒ လည်း ပြည့် 
၀ သွား လို့ ၊ ကိုယ် ၀န် လည်း ရ သွား လို ၊့ အ ဆက် အ သွယ် ဖြတ် လိုက် တာ လည်း ဖြစ် နိုင် ကြောင်း၊ သူ တို့နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကြီး တွေ မှာ လည်း အ ရွယ် ရောက်
တဲ့ လူ တိုင်း လက် မ ထပ် သေး ဘဲ သ မီး ရီး စား တွေ အ များ ကြီး ထား ပြီး ကာ မ ကို လွတ် လပ် စွာ ဆက် ဆံ ပြီး မှ ကိုယ့် စိတ် ကြိုက် အိမ် ထောင် ဖက် ကို ရွေး
ချယ် ကြ ကြောင်း၊ သ မီး ကောင် လေး က လည်း နိုင် ငံ ခြား မှာ အ နေ ကြာ လာ တော့ နိုင် ငံ ခြား ပုံ စံ အ တိုင်း သူ့ရဲ့အိမ် ထောင် ဘက် ကို အင် တာ နက် က နေ
ရှာ တာ လည်း ဖြစ် နိုင် ကြောင်း၊ ဓါတ် ပုံ တွေ ထဲ မှာ သူ စိတ် ကြိုက် ဖြစ် မဲ့ မိန်း ခ လေး တော် တော် များ များ ကို ရွေး ချယ် ၊ မိတ် ဆွေ ဖြစ် အောင် လုပ် ၊
ချစ် သူ ဖြစ် အောင် နည်း အ မျိုး မျိုး သုံး ပြီး မိန်း ခ လေး တွေ ဘက် က နေ သူ့အ ပေါ် တ ကယ့် ကို ယုံ ကြည် အား ကိုး လာ တော့ မှ မိန်း ခ လေး တွေ နေ တဲ့ နေ ရာ
ကို မ ရ ရ တဲ့ နည်း နဲ့ချိန်း တွေ့ခွင့် ရ အောင် လုပ် ပြီး နိုင် ငံ ခြား ပုံ စံ မျိုး လွတ် လွတ် လပ် လပ် တွေ့၊ သူ့ဆ န္ဒ ပြည့် ၀ အောင် လုပ် ပြီး၊ သူ
့ အ ကြိုက် တွေ့မဲ့ ရုပ် ရည် ရူ ပ ကာ၊ ကိုယ် လုံး ကိုယ် ပေါက်၊ ပ ညာ အ ရည် အ ချင်း၊ အ ဖက် ဖက် က ပြည့်စုံ ပြီး သူ့စိတ် တိုင်း ကျ ဖြစ် မဲ့ မိန်း ခ လေး
မျိုး ဆို ရင် တော့ တ ကယ် လက် ထပ် ယူ ချင် လည်း ယူ မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ မ ယူ ချင် သေး ရင် လည်း ဂ တိ တွေ ပေး ထား တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ နေ တဲ့ နိုင် ငံ တွေ
ဆီ အ လှည့် ကျ သွား နေ မှာ ဖြစ် နိုင် ကြောင်း၊ သူ နဲ့့ ရီး စား ဖြစ် ထား ကြ တဲ့ ချစ် သူ တွေ တိုင်း က လည်း ကောင် လေး နိုင် ငံ ကို သွား ချင် တဲ့ စိတ် ၊
ကောင် လေး အ ပေါ် လည်း ယုံ ကြည် စိတ် နဲ့ကောင် လေး ဆ န္ဒ တွေ အား လုံး ကို ဖြည့် ဆီး နေ မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ အဲ ဒီ လို ပုံ စံ မျိုး နဲ့သူ့ဘ ၀ ကြင် ဖေါ် ကို
ေ ရွး ချယ် နေ တာ လည်း ဖြစ် နိုင် ကြောင်း၊ ဒါ ပေ မဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ အ တွက် တော့ အ ရမ်းကို နစ် နာ ကြောင်း၊ ဒီ လို လူ ယုတ် မာ မျိုး ကို မိတ် ဆွေ သ ဘော
မျိုး တောင် မ ဆက် ဆံ သင့် ကြောင်း၊ သူ့ဆ န္ဒ ပြည် ၀ သွား လို့စိတ် ကြိုက် မ တွေ့တဲ့ သ မီး လို မိန်း ခ လေး မျိုး ဆို ရင် ကိုယ် ၀န် ဘဲ ရ ရ၊ ခြေ ထောက်
ကိုင် ပြီး ဘဲ တောင်း ပန်၊ မိ ဘ မောင် နှ မ တွေ ဘယ် လို နည်း မျိုး နဲ့ဘဲ တောင်း ပန်၊ သ နား ကြင် နာ စိတ် ရှိ မဲ့ လူ စား မျိုး မ ဟုတ် ကြောင်း၊သူ့ရဲ့ 
ထောင် ချောက် ထဲ ကို ရောက် ပြီး သူ့အ ပေါ် ယုံ ကြည် လို့အ ဖြေ ပေး ခဲ့ တဲ့ ဘယ် မိန်း ခ လေး ကို မှ လွယ် လွယ် နဲ့လက် လွတ် ခံ မဲ့ သူ မ ဟုတ် ကြောင်း၊ သူ
့ အ ပေါ် အ ဖြေ တွေ ဂ တိ တွေ ပေး ပြီး မှ သူ့အ ကြောင်း သိ သွား လို့သော် လည်း ကောင်း၊ မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ က သ ဘော မ တူ လို့အ
ဆက် အ သွယ် ဖြတ် ချင် ရင် တောင် အ ကြပ် ကိုင် မဲ့ လူ စား မျိုး ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒီ လို လူ ယုတ် မာ မျိုး တွေ က လည်း သ မီး တို့ လို အ တွေ့အ ကြုံ မ ရှိ
တဲ့၊ မိန်း ခ လေး မျိုး တွေ ကို ဘဲ လိမ် ညာ လို့ရ နိုင် မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒီ လို လူ ယုတ် မာ တွေ ကို အ ရမ်း ယုံ ကြည် အား ကိုး ပြီး ဘယ် သူ နဲ့မှ မ
တိုင် ပင် ဘဲ အ ဖြေ တွေ ၊ ဂ တိ တွေ ပေး ပြီး သူ နဲ့ချိန်း တွေ့ဘို့လက် ခံ လိုက် တာ သ မီး အ တွက် အ ရမ်း ကို မှား ယွင်း ကြောင်း၊ အ ရမ်း ကို ကံ ဆိုး
ကြောင်း၊ သ မီး ကို လည်း အ စွမ်း ကုန် ကူ ညီ ပြီး ဒီ အ မှု ကို ဖေါ် ထုတ် ပေး ချင် ကြောင်း ရဲ မှုး ကြီး က ရှင်း ပြ ပါ တယ်။
ဒါ ပေ မဲ့ သ မီး တို့အ မှု မျိုး က နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် မှာ ဖြစ် ခဲ့ လို့မြန် မာ ပြည် မှာ အ မှု့ဖွင့် လို့မ ရ နိုင် ကြောင်း၊ နှစ် ဦး လုံး
ချစ် သူ တွေ ဖြစ် နေ ကြ ပြီး သ မီး ကိုယ် တိုင် လည်း သ ဘော တူ တဲ့ သ ဘော မျိုး ဖြစ် လို့ မု ဒိန်း မှု့မ မြောက် နိုင် ကြောင်း ၊ မ လေး ရှား ကို သွား ပြီး
အ မှု့လုပ် ရင် လည်း ငွေ ကုန် ပြီး လူ ပင် ပန်း တာ ဘဲ အ ဖတ် တင် မှာ ဖြစ် ကြောင်း ၊ အား လုံး ဟာ သ မီး ရဲ့အ မှား တွေ တာ ဖြစ် ကြောင်း၊ အ ပြင် မှာ လုံး
၀ မ မြင် ဘူး တဲ့ လူ တ ယောက် ကို အင် တာ နက် က နေ ပြော သ မျှ ယုံ ပြီး တောင်း သ မျှ အ ချစ် တွေ ၊ ဂ တိ တွေ ၊ ခ န္ဒာ ကိုယ် တွေ အား လုံး မ ပုံ အပ် သင့် ကြောင်း
၊ တ ခါ မှ မ မြင် ဘူး တဲ့ လူ ပြော သ မျှ ကို ယုံ ပြီး အ ဒေါ် တွေ သူ ငယ် ချင်း တွေ တား မြစ် နေ တဲ့ ကြား က အ ဖြေ ပေး လိုက် တာ အ ရမ်း မှား တဲ့ အ ကြောင်း ၊ မ
လေး ရှား ကို လာ ဘို့လက် ခံ လိုက် တာ လည်း အ လွန် ကို မှား ယွင်း ကြောင်း၊ ဒီ လို အ ခွင့် အ ရေး မျိုး ကို ဘယ် လူ မှ လက် လွတ် ခံ မှာ မ ဟုတ် ကြောင်း၊ ကောင်
လေး မ လာ ခင် ရင်း နှီး တဲ့ မိတ် ဆွေ သူ ငယ် ချင်း တွေ၊ အ ဒေါ် တွေ ကို အ သိ ပေး တိုင် ပင် သင့် ကြောင်း၊ ကောင် လေး က ဒီ လို ကိ စ္စ မျိုး တွေ မှာ အ ရမ်း
ကို အ တွေ့အ ကြုံ ရင့် ကျက် တဲ့ သူ ဖြစ် ကြောင်း၊ သူ့မိ ဘ တွေ ကို လည်း အ ပြစ် မ မြင် သင့် ကြောင်း ၊ သူ့မိ ဘ တွေ လည်း ဒီ ကိ စ္စ တွေ ကို ဘာ မှ သိ ကြ
မှာ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ မိ ဘ တိုင်း က လည်း နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် ကြီး တ ခု ကို ရောက် နေ တဲ့ သူ တို့သား ကို လူ မျိုး တူ ဘာ သာ တူ တဲ့ လူ ကုံ တန် အ
တိုင်း အ ၀ိုင်း ထဲ က မိန်း ခ လေး မျိုး နဲ့ဘဲ ပေး စာ ချင် မှာ ဖြစ် ကြောင်း ၊ ဒါ ဟာ မိ ဘ တိုင်း ရဲ့ဆ န္ဒ အ မှန် ဖြစ် ကြောင်း၊ အင် တာ နက် က နေ အ ဖြေ ပေး
တဲ့ ဘယ် မိန်း ခ လေး ကို မှ လည်း ဘယ် မိ ဘ မောင် နှ မ၊ ဘယ် ဆွေ မျိုး အ သိုင်း အ ၀ိုင်း က မှ အ ထင် ကြီး လေး စား ပြီး ပေး စား ကြ မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း ၊
နောက် ဆုံး ကောင် လေး က တ ကယ် ချစ် လို့ယူ ခဲ့ ရင် တောင် ဘယ် မိ ဘ က မှ သ ဘော တူ ကြည် ဖြူ ကြ မှာ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ ဒီ လို အ ဖြစ် အ ပျက် မျိုး တွေ မြန် မာ
ပြည် လို နိုင် ငံ မျိုး မှာ တောင် မ ကြာ ခ ဏ လို ဖြစ် ပျက် နေ ကြောင်း၊ ရိုး အ ပြီး အ တွေ့အ ကြုံ မ ရှိ တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ ကို ချစ် ပါ တယ် ၊ ကြိုက်
ပါ တယ် ၊ အ လုပ် ရှာ ပေး ပါ မယ် ၊ နိုင် ငံ ခြား ကို ခေါ် ပေး ပါ မယ် ဆို ပြီး မက် လုံး တွေ ပေး ပြီး ဖျက် ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ အ များ ကြီး ရှိ
ခဲ့ ကြောင်း၊ အ ပြင် မှာ တ ခါ မှ မ တွေ့ဘူး မ မြင်း ဘူ တဲ့ လူ တ ယောက် ကို ပြော သ မျှ ယုံ ပြီး တောင်း သ မျှ အ ဖြေ တွေ၊ ဂ တိ တွေ ၊ ဓါတ် ပုံ တွေ မ ပေး
သင့် ကြောင်း ၊ မိန် ခ လေး တ ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး၊ အိ နြေ္ဒ သိ က္ခာ တင် မ က ဘဲ မိ ဘ မောင် နှ မ တွေ ရဲ့သိ က္ခာ နဲ့တန် ဘိုး လည်း အ လွန် ထိ ခိုက် ကြောင်း ၊ တ
ကယ် ယူ ဖြစ် ခဲ့ ရင် တောင် ဒီ လို ယော ကျာင်္း က သ မီး လို မိန်း ခ လေး မျိုး ကို တ သက် လုံး တန် ဘိုး ထား တော့ မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ မိန်း ခ လေး မိ ဘ
မောင် နှ မ တွေ ဘက် က နေ အ ကြောင်း ကြောင်း ကြောင့် ကောင် လေး နဲ့သ ဘော မ တူ လို့လက် မ ထပ် ဖြစ် ခဲ့ ရင် တောင် ကိုယ် ပေး ခဲ့ တဲ့ စာ တွေ ၊ ဓါတ် ပုံ တွေ
နဲ့အ ကျပ် ကိုင် နိုင် ကြောင်း၊ အ ရှက် ခွဲ နိုင် ကြောင်း၊ ကောင် လေး က လည်း နိုင် ငံ တ ကာ က မိန်း ခ လေး ငယ် ငယ် ချော ချော အ အ လေး တွေ ကို ကွန် ပြူ တာ တ
လုံး နဲ့ရှာ ပြီး လုပ် စား နေ တော့၊ မိန်း ခ လေး တိုင်း ကို လည်း သူ့လို ဘဲ အင် တာ နက် က နေ ယော ကျာင်္း တိုင်း နဲ့ဆက် သွယ် ပြီး ရီး စား တွေ အ များ ကြီး
ရှိ မယ် လို့ယူ ဆ မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ သူ့ကို အ ဖြေ ပေး တဲ့ မိန်း ခ လေး တိုင်း ကို လည်း သူ့နိုင် ငံ မှာ နေ ချင် လို့အ ဖြေ ပေး တာ လို့ယူ ဆ မှာ
ဖြစ် ကြောင်း၊ ဒီ လို တန် ဘိုး မ ထား လို့လည်း လွယ် လွယ် လေး နဲ့ချစ် ခွင့် ရ အောင် တောင်း၊ ချိန်း တွေ့ခွင့် ရ အောင် လုပ် ပြီး သ မီး ဘ ၀ ကို ဖျက် ဆီး
သွား ကြောင်း၊ သ မီး တို့ထက် အ ဆ ပေါင်း များ စွာ လယ် လို့လည်း နိုင် ငံ ကြီး တ ခု မှာ အ ခြေ ချ နိုင် တာ ဖြစ် ကြောင်း၊ သူ နဲ့လက် ထပ် ပြီး ရင် သူ
နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို သွား နေ ရ မယ်၊ သူ့မှာ အိမ် တွေ ကား တွေ လည်း ရှိ တော့ မိန်း ခ လေး တိုင်း က လည်း ဘယ် မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး မိတ် ဆွေ သူ ငယ်
ချင်း တွေ နဲ့ မှ တိုင် ပင် မ နေ တော့ ဘဲ သူ့နိုင် ငံ ကို သွား ချင် စိတ် နဲ့လွယ် လွယ် လေး နဲ့သ မီး တို့လို တောင်း သ မျှ အ ချစ် တွေ၊ ဂ တိ တွေ ၊ ခ
န္ဒာ ကိုယ် တွေ ကို ပါ ပေး ပြီး သ မီး လို ကိုယ် ၀န် တွေ ရ၊ ကောင် လေး မိ ဘ တွေ က လည်း အ ထင် သေး ပြီး သ ဘော မ တူ၊ သ မီး ရဲ့ဘ ၀ လည်း ပျက်၊ မိ ဘ မောင် နှ မ
ဆွေ မျိုး တွေ ရဲ့သိ ကာင်္ လည်း ထိ ခိုက် ၊ဖ ခင် ရဲ့အ သက် ပါ ဆုံး ရူံး ခဲ့ ရ ကြောင်း၊ တ ကယ် ပြ သ နာ တွေ ဖြစ် လာ တော့ ကိုယ့် မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား
ချင်း တွေ ဘဲ ငွေ တွေ ကုန်၊ လူ ပင် ပန်း ပြီး ဒု က္ခ တွေ အ များ ကြီး ဖြစ် ရ ကြောင်း၊ မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင်း အား လုံး ရဲ့ဂုဏ် သိ က္ခာ လည်း
ထိ ခိုက် ကြောင်း၊ မ မြင် ဘူး တဲ့ လူ တ ယောက် ကို ယုံ ပြီး အား ကိုး နေ မဲ့ အ စား ကိုယ့် ရဲ့ကိုယ် ပိုင် အ ရည် အ ချင်း၊ ကိုယ် တတ် ထား တဲ့ ပ ညာ နဲ့ 
ကိုယ့် ခြေ ထောက် ပေါ် ရပ် တည် ပြီး ကျိုး စား သင့် ကြောင်း၊ နိုင် ငံ ခြား ရောက် နေ ပြီး အ စဉ် မ ပြေ ကြ တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ အ များ ကြီး ကို လည်း သ မီး
လို ချစ် သူ ပုံ စံ မျိုး အ များ ကြီး လုပ် ထား မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ မိန်း ခ လေး တော် တော် များ များ က လည်း သ မီး လို ယုံ ကြည် ပြီး သူ့ဆီ မှာ စာ ရင်း တွေ
ပေး ထား မှာ ဖြစ် ကြောင်း၊ ရဲ မှုး ကြီး က သ မီး နဲ့ကျ မ တို့ကို စိတ် ရှည် လက် ရှည် နဲ့အ သေး စိတ် ကို ရှင်း ပြ ပြီး ဆုံး မ စ ကား တွေ ၊ အား ပေး
စ ကား တွေ ၊ နိုင် ငံ တ ကာ မှု့ခင်း အ တွေ့အ ကြုံ တွေ အ များ ကြီး ပြော ခဲ့ ပါ တယ်။ အ မှု ဖွင့် လို့မ ရ ဘူး ဆို တာ သိ ရ တော့ ကျ မ တို့လည်း အ ရမ်း
ကို စိတ် ဓါတ် တွေ ကျ ပြီး ပြန် လာ ခဲ့ ပါ တယ်။
ကျ မ လည်း အ ငြိမ်း စား ကျောင်း ဆ ရာ မ တ ဦး ဖြစ် သည့်အ တွက် ဘာ သာ စွဲ ၊ လူ မျိုး စွဲ မ ရှိ ပါ ဘူး ။ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့အ လို တော် လို့ဘဲ တ ရား နဲ့ 
ဖြေ ရ ပါ တယ်။ အ ခု ဖြစ် ပျက် ခဲ့ သ မျှ အ ဖြစ် အ ပျက် အား လုံး ဟာ လည်း ရဲ မှုး ကြီး ပြော ပြ သ လို ကျ မ သ မီး လေး ရဲ့အ မှား တွေ ပါ ။ တ ခါ မှ အ
ပြင် မှာ မ တွေ့ဘူး တဲ့ လူ တ ယောက် ကို အ ယုံ ကြည် လွန် ပြီး တောင်း သ မျှ အ ဖြေ တွေ ၊ စာ တွေ ၊ ဂ တိ တွေ ၊ ဓါတ် ပုံ တွေ မ ပေး ကြ ပါ နဲ့ ။ မိန်း ခ လေး တ
ယောက် ရဲ့သိ ကာင်္ နဲ့တန် ဘိုး ကို အ ရမ်း ကို ထိ ခိုက် ပါ တယ် ၊ မိ ဘ မောင် နှ မ တွေ ရဲ့သိ က္ခာ နဲ့တန် ဘိုး ကို လည်း အ ရမ်း ထိ ခိုက် ပါ တယ်၊ ကျ မ သ
မီး လေး ရဲ့ ရှေ့ရေး ကို မ တွေး တော မ ဆင် ခြင် လုပ် လိုက် မိ တဲ့ အ မှား လေး တ ခု ကြောင့် ၊ သ မီး ရဲ့ဘ ၀ တ ခု လုံး ပျက် ခဲ့ ရ ပြီး အ ပြစ် မဲ့ တဲ့ ဖ
ခင် ရဲ့အ သက် လည်း ဆုံး ရှုံး ခဲ့ ရ ပါ တယ်။ မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ လည်း ငွေ တွေ ကုန် ၊ လူ တွေ ပင် ပန်း ပြီး ၊ လူ တ ကာ ရဲ့တံ တွေး
ခွက် ထဲ မျော ရ ပါ တယ်။ သ မီး လေး ရဲ့အ ဖြစ် ဆိုး မျိုး မ ဖြစ် ရ လေ အောင်၊ ဒီ လို လူ မ ဆန် တဲ့ လူ ယုတ် မာ တွေ ရဲ့ထောင် ချောက် မျိုး က နေ အ ပြစ် မဲ့
ပြီး ရိုး သား တဲ့ မြန် မာ အ မျိုး သ မီး ငယ် လေး တွေ လွတ် ကင်း စေ ချင် တဲ့ ဆ န္ဒ နဲ့ကျ မ သ မီး လေး ရဲ့ဖြစ် ရပ် မှန် တွေ ကို မိ ခင် မေ တ္တာ အ ပြည့်ထား
ပြီး ရေး သား လိုက် ရ တာ ပါ။ သ မီး လေး ရဲ့အ ဖြစ် အ ပျက် တွေ ကို ရွာ က လူ တွေ သိ သွား တော့ သ မီး လေး အ ပေါ် စာ နာ သ နား တဲ့ သူ ၊ အား ပေး ကြ တဲ့ လူ တွေ
ရှိ သ လို၊ မေး ငေါ့ တဲ့ လူ တွေ၊ ကဲ့ ရဲ့အ ပြစ် တင် တဲ့ လူ တွေ လည်း အ များ ကြီး ရှိ ကြ ပါ တယ်။ ကျ မ တို့မိ သား စု လည်း အ ရမ်း ကို ရှက် လွန်း လို့ 
သား အ ကြီး ဆုံး နေ တဲ့ (ထိုင်း) နယ် စပ် ဘက် ကို မိ သား စု အား လုံး ပြောင်း ရွေ ခဲ့ ရ ပါ တယ်။ သ မီး ရဲ့အ ဒေါ် က လည်း သူ အ တန် တန် သ တိ ပေး နေ တဲ့ ကြား
က အ ဒေါ် အ ရင်း တ ယောက် ရဲ့မေ တ္တာ စေ တ နာ ကို စော် ကား လို့သ မီး အ ပေါ် အ ရင် လို ဂ ရု မ စိုက် ချင် တော့ ပါ ဘူး။ သ မီး ရဲ့အ ကို နဲ့အ မ တွေ က လည်း
သ မီး ရဲ့မက် မော ပြီး ရှေ့ရေး ကို မ တွေး တော မ ဆင် ချင် ဘဲ လုပ် လိုက် တဲ့ အ မှား တ ခု ကြောင့် သ မီး ရဲ့ဘ ၀ လည်း ပျက်၊ ဖ ခင် ရဲ့အ သက် လည်း ဆုံး
ရူံး ပြီး မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင်း အား လုံး ရဲ့သိ က္ခာ ကို လည်း ထိ ခိုက် တော့ အ ရမ်း ကို အ ရှက် ရ ပြီး သ မီး အ ပေါ် အ ရမ်း ကို ဒေါ် သ တွေ ဖြစ်
ကုန် ကြ ပြီး ဆူ ကြ ရိုက် ကြ ပါ တယ်။ ကိုယ် ၀န် အ ရင့် အ မာ ကြီး နဲ့မို့ကျ မ လည်း မ နည်း ကို တား ယူ ရ ပါ တယ်။ ဒီ လူ ယုတ် မာ နဲ့ သူ့မိ ဘ အ တိုင်း အ
၀ိုင်း က သ မီး လေး ကို အ သိ အ မှတ် မ ပြု ၊ တာ ၀န် မ ယူ ပေ မဲ့ အ ပြစ် မဲ့ တဲ့ ၀မ်း ဗိုက် ထဲ က ခ လေး ကို တော့ မ ရက် စက် ချင် ပါ ဘူး။ အ ခု တော့ သ မီး လည်း
အ ရမ်း ကို နောင် တ တွေ ရ နေ ပါ ပြီ။ စိတ် ထဲ မှာ လည်း ကောင် လေး အ ပေါ် မှာ အ ရမ်း ကို နာ ကျည်း သွား ပါ ပြီး။ သ မီး လို အ ဖြစ် ရပ် မျိုး ( ၂၀၀၉ ခု ဒီ ဇင်
ဘာ လ တုံး က စ ကာင်္ ပူ မှာ အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ တောင် ကြီး ဘက် က ( လီ ရှော ) မ လေး တ ယောက် လည်း ကြုံ ခဲ့ ရ တဲ့ အ ကြောင်း သင်း အုပ် ဆ ရာ ကြီး ပြော ပြ လို့ 
သိ ခဲ့ ရ ပါ တယ် )။ သ မီး နဲ့ကျ မ တို့ဆွေ မျိုး အ သိုင်း အ ၀ိုင်း တွေ နဲ့ဘု ရား ကျောင်း က သင်း အုပ် ဆရာ ကြီး တွေ၊ ရဲ မှုး ကြီး တွေ ရဲ့အ ကြံ ပေး
ချက် အ ရ သ မီး တို့လို ရိုး သား ပြီး အ တွေ့အ ကြုံ မ ရင့် ကျက် တဲ့ မြန် မာ ပြည် မှာ နေ ထိုင် ကြ တဲ့ က ရင် မ လေး တွေ နဲ့နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည်
တွေ မှာ အ လုပ် လုပ် နေ ကြ တဲ့ က ရင် အ မျိုး သ မီး လေး များ နဲ့မြန် မာ အ မျိုး သ မီး လေး များ အား လုံး အ ပေါ် မှာ စိုး ရိမ် စိတ် နဲ့မေ တ္တာ အ ပြည့်
ထား ပြီး သ မီး လေး လို အ ဖြစ် ဆိုး မျိုး မ ကြုံ ရ လေ အောင် ရေး သား လိုက် ရ တာ ပါ။ သ မီး လည်း နောက် လ လောက် ဆို မွေး တော့ မှာ ပါ။ သ မီး လေး ကို အ ရမ်း
ရိုး သား လို့ချစ် သွား ခဲ့ မိ တဲ့ သူ၊ မိ ဘ တွေ သ ဘော မ တူ ခဲ့ ရင် တောင် လက် ထပ် ပြီး သ မီး ဘာ သာ ထဲ ကို ၀င် ပါ မယ် ဆို တဲ့ သူ၊ အ ခု တော့ သူ အ
ရမ်း ကို ချစ် တဲ့ ချစ် သူ နဲ့သူ့ရဲ့ရင် သွေး လေး ရဲ့မျက် နှာ ကို တောင် မ ထောက် တော့ ဘဲ မိန် ခ လေး ဘယ် နှစ် ယောက် ကို များ သ မီး လို မ မြင်
ဘူး သေး ဘဲ ချစ် ပါ တယ်၊ လက် ထပ် ပါ မယ် လို့ဂ တိ တွေ ပေး ပြီး စော် ကား ဖျက် ဆီး ဘို့ကြံ ရွယ် နေ သ လဲ ဆို တာ တွေး ပြီး အ ရမ်း ကို စိုး ရိမ် မိ ပါ
တယ်။ ရဲ မှုး ကြီး ပြော သ လို သ မီး နဲ့မ တွေ့ခင် က လည်း မိန်း ခ လေး ဘယ် နှစ် ယောက် လောက် ကို များ သ မီး လို ယုံ ကြည် မှု ရ အောင် လုပ်၊ ချိန်း တွေ့ 
ခွင့် ရ အောင် လုပ် ပြီး ဖျက် ဆီး စော် ကား သွား ခဲ့ ပြီး လည်း ဆို တာ မ တွေး ရဲ ပါ ဘူး။ သ မီး လေး ရဲ့ဘ ၀ ကို ရက် ရက် စက် စက် စော် ကား ခဲ့ ပြီး ကျ မ
တို့မိ သား စု တ ခု လုံး ရဲ့ဘ ၀ ပျက် အောင် လုပ် သွား ခဲ့ တဲ့ လူ ယုတ် မာ ဆီ အင် တာ နက် က နေ ကျ မ ရော သ မီး ရော စာ တွေ အ များ ပို့လိုက် ပေ မဲ့ ဘာ မှ
အ ကြောင်း မ ပြန် တော့ ပါ ဘူး။ အ ခု ကျ မ ရေး တဲ့ ဒီ စာ ကို လည်း ဒီ လူ ယုတ် မာ ဆီ ပို့လိုက် ပါ တယ်။ သူ နေ တဲ့ နိုင် ငံ က သံ ရုံး ကို လည်း အ ကြောင်း
တော့ ကြား ထား ပါ တယ်။ နိုင် ငံ တ ကာ မှာ အ လုပ် လုပ် နေ ကြ တဲ့ မိတ် ဆွေ က ရင် အ မျိုး သ မီး ငယ် များ၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ချင်း၊ က ချင်၊ က ယား နဲ့မြန် မာ
တိုင်း ရင်း သား၊ တိုင်း ရင်း သူ များ ထံ လည်း ဒီ စာ ကို ပို့လိုက် ပါ တယ်။ သ မီး လေး ရဲ့တ ကယ့် ကြေ ကွဲ ဖွယ် ဖြစ် ရပ် မှန် တွေ ကို ဖတ် ရူ့ပြီး မိ မိ
နဲ့ရင်း နှီး ကြ တဲ့ မိတ် ဆွေ သူ ငယ် ချင်း များ ထံ လည်း တ ဆင့် ဖြန့်ဝေ ပေး ကြ ဘို့မေ တ္တာ ရပ် ခံ ပါ တယ်။ နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ အ လုပ်
လုပ် နေ ကြ တဲ့ သူ ငယ် ချင်း များ ထံ လည်း ပို့ပေး ကြ ပါ။ အ ဓိ က သ တိ ပေး ချင် တာ က တော့ ကျ မ သ မီး လေး လို မ မိုက် ပါ နဲ့ ။ မိန်း ခ လေး တ ယောက် ရဲ
့တန် ဘိုး၊ အိ နြေ္ဒ သိ က္ခာ ကို ကျ အောင် မ လုပ် ကြ ပါ နဲ့ ။ မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင် တွေ ရဲ့ သိ က္ခာ နဲ့တန် ဘိုး ကို ထိန်း ကြ ပါ။ ကိုယ် တတ်
ထား တဲ့ ပညာ၊ ကိုယ် ပိုင် အ ရည် အ ချင်း နဲ့ကြိုး စား ကြ ပါ။ ကျ မ သ မီး လေး လို ဖြတ် လမ်း က နေ အ ချောင် လိုက် မိ လို့ ကျ မ တို့မိ သား စု တ ခု လုံး ရဲ
့ ဘ ၀ ပျက် ခဲ့ ရ တာ ပါ။ ဒီ လို လူ ယုတ် မာ တွေ ရဲ့လက် ချက် နဲ့ကျ မ သ မီး လေး လို ဖျက် ဆီး ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ မိန်း ခ လေး တွေ လည်း အ များ ကြီး ရှိ ကြ မှာ
ပါ။ ကျ မ သ မီး လေး လို နိုင် ငံ ခြား ကို သွား ချင် စိတ် နဲ့မိ ဘ မောင် နှ မ ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ ကို မ တိုင် ပင် ဘဲ၊ အ သိ မ ပေး ဘဲ မ မြင် ဘူး မ တွေ့ 
ဘူး တဲ့ လူ တွေ ကို ယုံ ပြီး အ ချစ် တွေ၊ ဂ တိ တွေ ၊ ခ န္ဒာ ကိုယ် တွေ ပုံ မ အပ် ကြ ပါ နဲ့ ။ ကိုယ် အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ နိုင် ငံ ကို လည်း မိ ဘ မောင် နှ မ တွေ
ကို အ သိ မ ပေး ဘဲ အ တွေ့မ ခံ ကြ ပါ နဲ့ ။ ရဲ မှုး ကြီး ပြော သ လို အင် တာ နက် က နေ အ ဖြေ ပေး တဲ့ မိန်း ခ လေး ကို ဘယ် မိ ဘ အ သိုင်း က မှ အ ထင် ကြီး
ပြီး လက် ခံ ကြ မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ ရိုး သား ပြီး အ တွေ့အ ကြုံ မ ရှိ တဲ့ က ရင် မ လေး တွေ နဲ့မြန် မာ တိုင်း ရင်း သူ အ မျိုး သ မီး ငယ် လေး များ ဒီ လို
လူ မ ဆန် တဲ့ လူ ယုတ် မာ တွေ ရဲ့ ထောင် ချောက် မျိုး က နေ လွတ် နိုင် ပါ စေ။ သင်း အုပ် ဆရာ ကြီး ပေး တဲ့ အင် တာ နက် လိပ် စာ တွေ ကို လည်း ရေး ပေး လိုက် ပါ
တယ်။ မိ မိ နှင့် ရင်း နှီး သူ များ ထံ တ ဆင့် ဖြန့်ဝေ ပေး ကြ ပါ။ မိ မိ တို့အ လုပ် လုပ် နေ ကြ တဲ့ နိုင် ငံ က ဘာ သာ ရေး အ ဖွဲ့အ စည်း များ ကို
လည်း ပို့ပေး ကြ ပါ။ ကြည်သူဦးရေ: 29614
အမျိုးအစား: ပညာပေး ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 11 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
3:10pmမှာဇွန်လ 9, 2014 တွင် Min Moe Thu မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် လူမဆန်‌တဲ့‌‌ကောင်‌ 1:30pmမှာဧပြီလ 27, 2014 တွင် စိုင်းမဟီ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် မိုက်‌ရိုင်းတယ်‌ငါတို့ဘာသာကို‌စော်‌ကားတယ်‌ 3:49pmမှာအောက်တိုဘာလ 7, 2013 တွင် ဇလပ်နွယ် မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် တတိုင်းပြည်ထဲမှာလူဖြစ်လာပြီတခြားနိုင်ငံမှာတွေ့ကြတာကိုယ်ကတောင်စောင့်ရှေက်သင့်တာအဲကောင်လူမဖြစ်နိုင်ဘူး 8:55pmမှာစက်တင်ဘာလ 15, 2013 တွင် aungsan မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ​ပြောရမှုခက်​တယ်​ 2:24pmမှာဇူလိုင်လ 26, 2011 တွင် phyothuthuko မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် ဟုတ်တယ်ဟေ့...မင်းပြောတာမှန်တယ့်ငါတို့ ယောက်ျားတွကိုပဲအပြစ်တင်နေတာ...သူတို့မိန်းမ ကြတော့
ဟွန်း မပြောလိုက်ချင်ဘူး............ 4:59pmမှာမေလ 14, 2011 တွင် နေယံသွေး မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် တောက်...အဲကောင်လုက်တာနဲ့...နေ၇င်းထိုင်၇င်း..ငါတို့ယော်ကျာ်းတွေပဲ..မကောင်းဖြစ်၇တယ်..
အပြန်မှာတွေ့လိုက်တော့...ငါ့လက်သီး..စက်ထက်မြန်တယ်ဆိုတာသိစေ၇မယ်.........း) 1:05pmမှာမေလ 3, 2011 တွင် thidar မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက်ကောင်လေးက ဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားလို့လဲ။ ကောင်မလေးကရော ။ နှစ်ယောက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် မြန်မာပြည်ကတရားဥပဒေနဲ့တရားစွဲပြီးအမှန်ကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်လေ။ DNA စစ်ကြည့်ပေါ့။ ဒီလောက်ဆေးပညာတွေခေတ်မှီတာကို။ ကံတရားလို့မှတ်ယူထားရင်လည်း တစ်နေ့ ဒီကောင်လေး ၀ဋ်လည်မှာပါ။ ကိုယ်လည်း ၀ဋ်ပေးဆပ်စရာရှိလို့ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်သဘောထားပေါ့လေ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားနာစိတ်. မိခင်စိတ် .သနားစိတ်တွေကိ အခွင့်အရေးယူကြတဲ့ကောင်တွေတစ်နေ့ သူတို့ကျမှ ရင်နဲ့မဆံအောင်ခံရလိမ့်မယ်။ အခုလို့ သတိပေးပညာပေးရေးပေးတာ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် 9:53amမှာမေလ 2, 2011 တွင် Zawe Mg မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် အဖြစ်အပျက်က သနားစရာပါ........
ဘာသာရေးခွဲခြားတာမျိုးတော့မပါစေချင်ဘူးဗျာ...... 9:49amမှာမေလ 2, 2011 တွင် orchid မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် စိတ်ကကောင်းပါဘူး ဒီခေတ်ကြီးမှာ မိန်းကလေး တွေအနေဖို့မသင့်တော့ဘူး 3:51amမှာမေလ 2, 2011 တွင် ဖွေးလီ မှရေးခဲ့သောမှတ်ချက် မိန်းမသားချင်းတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ဒီစာကိုဖတ်ရသူတိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်တာဖြစ်စေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ သင်ခန်းစာလေး ယူကြပေါ့။
အားလုံးကောင်းသော သူငယ်ချင်းနဲ့အွန်လိုင်းပေါ် ကြုံဆုံနိုင်ကြပါစေနော်။ 1